Ahoana no iatrehana tsara an'i Amazon ary ho lasa mpivarotra mahomby any?
Andao hiatrika izany - raha te-hahatakatra ny fomba tokony handaminana tsara ny Amazon amin'ny maha-mpivarotra tena mahomby anao ianao dia mila mandray ity fanambarana manaraka ity ho zary. Midika izany fa matetika dia tsy miraharaha fotoana malalaka ny mpikirakira elektronika sy mpikirakira ny SEO (ary na ny mpividy aza), ka mifantoka amin'ny môtera fikarohana Google. Mazava ho azy fa io no goavam-pikarohana manerantany. Saingy ny zavatra dia hoe raha mivarotra Amazon ianao, dia tokony ho zava-dehibe lavitra noho izany ny tsenan'ny aterineto misy anao, fa tsy zavatra hafa - valvole per radiatori. Nahoana? Amin'ny ankapobeny satria raha vao tonga amin'ny fikarohana ireo vokatra amidy, Amazon dia misy zavatra iray avo im-telon'ny fikarohana. Mahagaga, sa tsy izany? Noho izany, etsy ambany aho dia hizara fahalalana kely azo tsapain-tanana ho anao hahafantaranao ny fomba amam-panaovana tsara an'i Amazona mba hahatongavan'ny farany mpivarotra amina varotra mivarotra any.
Ahoana no hametrahana tsara an'i Amazonia
Voalohany indrindra, andeha hojerentsika ny fahasamihafan'ny lanjany lehibe eo amin'ny mpamorona lehibe indrindra (toa an'i Google) ary ny fomba hanehoana tsara an'i Amazonia - nalaina tamin'ny ambaratonga.
Fiovam-po sy fahafaham-po amin'ny User
Alohan'ny zavatra hafa, ny teboka lehibe amin'ny fahasamihafana misy eo amin'i Google sy Amazôna dia ny hoe ny motera lehibe indrindra dia natao hamolavolana ny dokambarotra indrindra - manome valiny haingana ary mampisy azy hiverina amin'ny fikarohana miverimberina mba ahafahanao manao fikarohana bebe kokoa, ary amin'ny farany - manome tsindry bebe kokoa amin'ny dokam-barotra. Vokatr'izany dia mitodika amin'ny ankamaroan'ny fotoana isaky ny fitsidihan'ny mpampiasa ny fahitana ny fahombiazan'i Google, ary koa ny klioba. Amin'izany fotoana izany ihany anefa, i Amazon dia mifantoka bebe kokoa amin'ny fanomezana vola miditra bebe kokoa na maridra mitentina isaky ny fangatahan'ireo mpividy entana mba hahazoana vokatra iray amidy. Midika izany fa mety hamerina indray ny valin'ny fikarohana i Amazona mba hahafahan'ireo mpanjifa marobe miovaova ho lasa mpividy marina. Izany no antony raha te-hahalala ny fomba hivarotana bebe kokoa amin'ny Amazon - tokony hifantoka amin'ny fanatsarana ny fiovam-po ianao, voalohany sy ambony. Satria, araka ny fomba fijerin'ny algorithm amin'ny alàlan'ny karoka A9, ny fifampiresahana bebe kokoa dia midika fa manome vola bebe kokoa ho an'ny sehatry ny orinasa Amazon ecommerce.
Ny tanjaky ny fahombiazan'i Amazonia sy ny fahamendrehana
Ny tena mahazatra, ireo singa fototra amin'ny amazona dia mizara ho sokajy roa samihafa - ianarantsika avy. Ary eto izahay dia tonga eo amin'ny teboka farany - tokony hanao fahasamihafana mazava eo amin'ireo antony roa ireo ianao hahatakatra ny fomba hananganana tsara an'i Amazon. Eto izy ireo.
Ny vokatra fototra - ny zava-drehetra momba ny singa fototra amin'ny fampisehoana (ny taham-pivoarana, ary koa ny vidin'ny vokatra sy sary) dia tsy sarotra loatra. Raha tsorina, ny tsirairay amin'ireo antony ireo dia hanome famantarana mahery avy any Amazonia fa ny vokatrao dia mety hivarotra tsara, na dia tsara toerana aza.
Fahamarinana misongadina - ity sokajy ity dia mamaritra ny saha lehibe indrindra amin'ny pejin-tranonkalanao momba ny lisitra ampiasain'ny A9 mba hahitana raha tena manan-danja tokoa ny vokatrao amin'ny vokatra. Ireto ny singa fototra ao amin'ny lisitrao izay fantatra fa tena zava-dehibe indrindra: Product Title, Marika, Lisitry ny Bullet Points, Product Description, Backend Search Terms, Name Seller, Setup, Process Daily, Filaharana, Customer Reviews, as ary ny Total Sales anao.